Bombardier CRJ napetraka saingy tsy hita ao amin'ny Preparation 3d v4.5
fanontaniana Bombardier CRJ napetraka saingy tsy hita ao amin'ny Preparation 3d v4.5
1 volana 4 herinandro lasa izay - 1 volana 4 herinandro lasa izay #1425 by thaiphoon
Tena fiaramanidina tsara tarehy, Erik! Angamba ilay fiaramanidina bitika tena tsara indrindra amin'izao fotoana izao.
IZANY: Nalefako ilay fiaramanidina, nametraka azy io tamin'ny fametrahana mora, eny, tsindrio Prepar3dv4 rehefa nitrahy, saingy tsy miseho rehefa misokatra ny Fiomanana.
Nandritra ny fametrahana dia nilazana aho fa misy ny fanavaozana ho an'ity AC ity, saingy tsy fantatro ny fampidirana izany tahiry izany. Afaka manampy ve, azafady? Misaotra anao.
Fanamarihana fanampiny: Imbetsaka aho no nanamboatra sy nanaisotra ilay fiaramanidina, ary ny vokatra ratsy rehetra dia foana. Nijery ireo vaovao farany aho (aiza no haka ny download ??) saingy ny fanavaozana dia natao noho ny antony hafa.
Fanovana farany: 1 volana 4 herinandro lasa izay thaiphoon. Antony: maro kokoa no nampiana
1 volana 4 herinandro lasa izay #1426 by rikoooo
Azafady azafady ny andiany farany, araka ny nambaranao fa misy fanavaozana. Hamaha ny olana misy anao izany:
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: alinho
1 volana 4 herinandro lasa izay #1427 by thaiphoon
Tiako ny hisaotra anao noho ny fanampianao. Tena nampandeha io fampiharana vaovao io. Tokony ho ny maestro amin'ny fiaramanidina fiaramanidina, toy ny hoe Roger Federer (mon compatriote) no maestro amin'ny tennis.
Fotoana mamorona pejy: 0.664 segondra